Ukunqatshwa ifa bese bekhetha omunye indlalifa - inqubo kulungiselelwa labo ababelambele ungafuni ukuthatha impahla emva kokufa umuntu isihlobo noma omunye. Lesi sinyathelo kunemiphumela, futhi ukwehluleka akunakwenzeka ezivela kuye.
Isiphetho impahla ngofuzo
Ifa ziwumsebenzi abamukeli ngemva kokufa umnikazi walo ngokomthetho noma intando. kuphakama umbuzo nezihlobo noma izindlalifa ngaphansi intando ukuthi benzeni impahla, lapho efika. Thatha noma cha? Uma uthi yebo, ngendlela yokuhlukanisa bodwa?
Ukunqatshwa ifa bese bekhetha omunye indlalifa ingenye izinyathelo ongazithatha.
Abalandela unezinyanga eziyisithupha ukuqinisekisa ukuthi isinqumo. Phakathi nalesi sikhathi, ukuba khona kuyo yonke imibhalo kuleso sakhiwo, ummeli olungisa izivumelwano uhambisa izicelo kwi-amabhange, izinhlangano credit ngenhloso ukuthola amanani atholakalayo.
Ukunqatshwa ifa bese bekhetha omunye indlalifa - isinyathelo esiqondile. It phuca umuntu kwanoma iliphi ilungelo impahla, okuyinto wayeke wafa. Ukuze kuxazululwe le nkinga futhi unikezwa izinyanga 6. Shintsha imibono yabo esikhathini esizayo kuyoba into engenakwenzeka, nakuba kwamanye amazwe, lokhu uvunyelwe ngaphansi esiyizinyanga eziyisithupha.
Kukhona amacala amaningi umkhuba, lapho isakhamuzi efana futhi akusho zenqaba ukuthatha impahla, kodwa akazange athumele uhlelo lokusebenza ummeli olungisa izivumelwano. Uma ngabe izenzo ezinjalo ezibhekwa waiver of ifa bese bekhetha omunye indlalifa noma cha, ivumela ingxabano enkantolo.
Kuye ngezimo, umuntu onjalo angase ukuqashelwa indlalifa enkantolo njengoba. Okunye ASSIGNEES kungathatha ngisho ke isimemezelo ngokuhlanganyela umbuthano wakhe uma ngaphuthelwa umnqamulajuqu ukuze afake isicelo. Kulesi sikhundla, zokwenqaba kungamukelwa.
Isizathu esiyinhloko ukuthi amabutho bayenqaba ukwamukela izindlu, - ngokweqile izikweletu enkulu oshonile. Umthetho kukhawulela kwenkululeko nezidingo ifa, kanye transferee utawuba nelicala ngabo kuphela kohlaka izindleko izimpahla kuluthola. Ukwenza amadokhumenti kuwufanele imali nesikhathi, futhi imiphumela yomsebenzi ngizoya bonke abantu abakweletwayo ngalesi simo esifanayo. Esinye isizathu - impahla asifanele ukusetshenziswa ukukhanda noma ukwakhiwa kabusha izobiza ebiza kakhulu. Abanye ibhekene yokuthi inani ewumphumela ngokucacile ongabalulekile lowo, futhi akunandaba mqondo ukuchitha isikhathi wakhe kanye nemali. Akusona yokuthi uzothola isinxephezelo.
Ubani onelungelo lokwenqaba ukuya
Umthetho unikela iingaba ezimbili abathengi:
ngokuvumelana ifa emgqeni.
Izindlalifa kuqala yilabo ezisohlwini intando. Uma ayisona noma njengoba kumemezela emthethweni, impahla lihlukaniswe phakathi yizindlalifa ngokwethemba emgqeni ngokomthetho.
Futhi inhlanganisela avunyelwe: i-utawufaka kuphela ingxenye yempahla, amasalela kulokhu sihlukene phakathi ngokusho kulayini.
Ukunqatshwa ifa bese bekhetha omunye indlalifa is kuvunyelwe uma mithandazo ungeniswe libe yifa labo. Ubizwa ezisohlwini intando, noma inombolo emugqeni, elimalungu alo Unelungelo ukuthenga.
Kuze kube isakhamuzi ingahambi ilungelo bathole ifa, futhi wayengafisi ithuba ukuyeka. Awukwazi ukulahla okungavunyelwe.
Ifa kungenzeka abantu abaphilayo kuphela.
Uma owalandela engaphansi kwengu-18 ubudala
Abancane noma izakhamuzi abangakabi engu-18 ubudala, banelungelo ifa kanye ukuyeka.
Izingane kamufi zifakwe abamukeli lokuqala impahla. Iziqu ezahlukene ubuhlobo ezidudula emugqeni ezifanele. Ingane Ungashintshanisa abazali bazo izindlalifa ulayini uma wafa ngaphambi testator ngelungelo ukumelwa. Ikhishwa uhlobo esikhundleni.
Umthetho uhlinzekela ukuhlanganyela wokweshumi. essence yayo wukuthi ingane ithola isabelo okuqinisekisiwe noma okuyimpoqo impahla, uma intando ikhona. Ufanelwe ukuba okungenani kwesigamu ingxenye elaliyoba ngenxa kuye ngaphansi komthetho. Lokhu ngokulinganayo kusebenza ingane, aphethwe wetha libe ngamafa, futhi waze indlalifa ngelungelo ukumelwa.
Umthetho kudinga notaries ukuze azise iziphathimandla sivikelwe izingane izindlalifa.
Uma ungenalo izingane noma ngabe yisiphi isizathu, Abameli, guardianship ukhombe yakhe, lokuthi wayeseholela wahlanganyela kuvikeleke izidingo zengane. Ukwenza amadokhumenti ukungena ifa efulethini - isibopho esiphathelene ne-trustee. Nokho, umntwana onesifo engu-14, unelungelo amalungelo abo ngokubhala amazwi ummeli olungisa izivumelwano.
Umthetho uyenqaba ukuba kuncishiswe impahla kanye namanye amalungelo ingane. Empeleni, ukwehluleka abamele esisemthethweni amalungelo ayo akunakwenzeka. Futhi ngaphandle kwemvume guardianship kungamukelwa. Ngaphezu kwalokho, ayivumeli nesinqindi share okuyimpoqo ifa.
Ngaphakathi whose ekuthandeni kuchithwa kuvunyelwe
Umthetho muva cishe mingcele zalabo whose ekuthandeni kuchithwa kuvunyelwe (Art. 1158 Civil Code). Ingabe, isibonelo, ukubaluleka zonke izindlalifa engimangalelwe?
Ayikho ukwehluleka uvunyelwe obusekela noma ubani omunye ukuba ibe yindlalifa emthethweni futhi ngaphansi intando, kungakhathaliseki degree of nokuzwelana, kanye ifa wayilethela abantu ku isethulo noma esenziwa ukudluliswa sitholwa njengefa.
Akuvunyelwe adlule ngokulandelana kwabo abantu ababhekene neyaziwayo njengezindlalifa ezikanye bengafaneleki.
Umuntu ongabhalisiwe kwelinye emigqeni izindlalifa ngumthetho, akukhulunywa ngaye intando, angeke abe esikhundleni uyenqaba nazo. okungukuthi uthumele ilungelo labo kungaba onikeziwe engaba ngaphansi komthetho noma intando kuphela.
Nokho, kukhona imikhawulo embalwa lapho ukwehluleka akunakwenzeka:
Impahla ngokugcwele basakaza itestamente;
yokufuna okuphoqelekile okwenziwa ezikhungweni nokwabelana.
I testator unelungelo ukukhetha elilodwa noma zonke izindlalifa esikhundleni uma kwenzeka, uma benqaba, noma enqatshelwa kokuthola impahla ngokusemthethweni noma bayokufa. It bavunyelwe ukuhluleka kuphela, ngoba kulesi simo esikhundleni isivele enikeziwe.
It has kuchithwa esinqunyiwe
Umthetho sicindezelwa ukuba benze isinqumo esicacile - ukwamukela ifa noma cha. Ukwenqaba ingxenye ifa akuvunyelwe. Ngesikhathi esifanayo, kukhona omunye isikhundla ukugwema kokuvinjelwa.
Ukulandelana angathengwa ngumthetho noma ngentando noma ahileleke oda ukudluliswa. Sikhishwe ilungelo lokukhetha ukuthengwa kwempahla eyodwa noma ngezizathu eziningana ngesikhathi esisodwa.
Ngokwesibonelo, indlalifa unelungelo lokuthola isabelo efulethini ngaphansi komthetho futhi ngaphansi intando imoto, ngenxa yokuthi ngaphambi kokuba afe, umnikazi ayikwazanga uyakhetha ukuthi ubani impahla. It uhlala ukukhetha ukuthola esigxotsheni endlini noma imoto, noma lokwenza kokubili ukuthi nomunye.
Kodwa abaningi nenqaba ukuhlanganyela ingcebo, ikakhulukazi uma kuyinto encane, kanti futhi le nqubo yokubhalisa kwemibhalo ukungena ifa efulethini kunalokho xaka.
Ngakho, kungenzeka ukuthi namanje ukuthatha isabelo enengqondo kakhudlwana.
Imibhalo zokwenqabela leso libe yifa zingahlelwa mathupha noma umelwe, okuyinto samukelwa kuphela ifomu ukugunyazwa. Likubeka ngokucacile ilungelo nginqabe ifa ngofuzo kumuntu othile. Uma Ukwenqaba kuvunwa othile, futhi lokhu kwakubonisa ukuthi indoda.
Indlela yesibili ukuthumela ukuhluleka - ngokusebenzisa isevisi yeposi noma nge neposi. Imibhalo zokwenqabela leso libe yifa ithunyelwa ngqo ummeli olungisa izivumelwano eyathola into sitholwa njengefa. Ungakwazi ukukhipha amandla ommeli bese uthumela ngeposi ku-omele ekhethiwe.
Indlela ukubhala isicelo
Isitatimende idokhumende ejwayelekile:
inombolo ehhovisi noma igama ummeli olungisa izivumelwano;
Igama lendawo komfakisicelo lokuhlala;
ngokuqondile ukwenqaba share ngenxa ngemva (igama lomufi), degree of nokuzwelana;
ukwenqaba ummeli olungisa izivumelwano yefa notarized nesignesha kasomabhizinisi futhi uphawu, bafakwa isinyathelo.
Izinhlobo amadokhumenti, ukuze izinkinga musa kuphakama. Uma zokwenqaba wathonywa ubudlova noma ukukhwabanisa, ungazama inselelo enkantolo.
Ukuze siqinisekise isicelo ka wokulungisa izivumelwano, kumele ube iphasipoti, isitifiketi sokufa le testator futhi ubufakazi ubuhlobo, noma intando.
Umuntu ongafuni ukuba abe yindlalifa, kungase umnqamulajuqu yokubhala isicelo. Umphumela ungase ube yokufuna engadingeki kwempahla bephikisa intando yakhe. Futhi ababolekisi ngenisa it ukunakwa kwakho ukuthi ezinye abathengayo ukulimaza kuphela.
Emthethweni kanye umkhuba ukuhlinzekela ilungelo amangalele enkantolo nobuso ukuqashelwa kungamukelwa ifa.
izenzo Yini ngokuvamile esekelwe:
izenzo ngokuvumela ukukhuluma mayelana ukwamukela ifa, wayekade elenziwe ngemva kwesikhath we sikhathi sezinyanga ezingu-6;
Ukunakekelwa nokulungiswa olwenziwa egameni nezinye izindlalifa.
Ngokwesibonelo, abahlala efulethini umufi awabona ngempela ubufakazi ukwamukela ifa.
Inqubo ukwenqaba wonke umuntu okufanayo, kungakhathaliseki ukwenza kube izindlalifa lokuqala noma okwalandela.